XOG: Mucaaradka madaxweyne Farmaajo oo Diyaariyay Qorshihii ugu dambeeyay oo Madaxweynaha lagu…. – Kismaayo24 News Agency
XOG: Mucaaradka madaxweyne Farmaajo oo Diyaariyay Qorshihii ugu dambeeyay oo Madaxweynaha lagu….
by admin 16th January 2018 087
Xubnaha mucaaradka ku ah madaxweyne farmaajo ee hadda ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxa ay bilaabeen kulamo xasaasi ah oo ku saabsan qaabkii uu xilka u baneey lahaay ra’isul wasaare xasan cali kheyre.
Xubnahaan ku kulansan muqdisho ayaa waxa ay iska dhaadhiciyeen in kalsoonida farmaajo hadda heysto lagu bur burin karo kaliya in xil ka qaadis lagu sameeyo ra’isul wasaare mudane xasan cali kheyre.
Haddaba si ra’isul wasaaraha xilka looga qaado xubnaha ugu cad cad damul-jadiid ee ku jira baarlamaanka federaalka ayaa waxa soo jeediyeen in mooshinkii ugu cuslaay laga diyaariyo xukuumadda kheyre si ra’isul wasaaruhu kursiga u baneeyo.
Kalsoonida shacabka ee Madaxweynaha ayaa sii siyaaday tan iyo markii uu bilaabay safar uu ku marayo gobalada dalka, waxaana Mucaaradka dowlada ay Muqdisho ka wadaan wada tashiyo aan caadi aheyn oo ay ku abaabulayaan buuq siyaasadeed inay ku furaan Madaxda dalka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dhowr jeer hore u diiday inuu Kheyre ku cadaadiyo in xafiiska laga diro, waxaana hada la ogeyn kulamada mucaaradka Muqdisho ka wadaan natiijada ka dhalan karta
Madaxweyne farmaajo oo ah shaqsi ay inbadan u riyaaqeen shacabka soomaaliyeed meelkastoo ay joogaan ayaa si aad ah ugu kalsoon Ra’isul wasaarihiisa mudane xasan cali kheyre oo isagana shacbiyad badan sameystay tan iyo markii uu xafiiska qabtay.
Sawirro: Agaasime koofi oo Kormeer ku sameeyay bar xaduudka Tuurdibi oo ka tirsan degmada galdogob ee gobolka Mudug.
Ciidamada Ethopia oo Xabsiga Dhigay Saraakiil Ahlusunna ka tirsan iyo Wariyaal.
XOG : Corneyl Cabaas Ibrahim Gurey oo Ciidamada Amsiom ay go’aamiyeen in loo wareejiyo Magaalada Kismaayo kadib markii uu la Shaqeyn waayay Maamulka Degmada Baardheere.
admin 14th January 2016 14th January 2016